About Us | City Square Interior & Exterior Decoration (Myanmar)
Quick Contact : +(95 9) 43138630
City Square, which is established in 2007 asafounded by Mr.Nanda who work in Malaysia interior decoration industry serveral years.
Orgenized with strong techinical background Enginers, Designers and fit our installers, Carpenters, workers. It is Especially focus on the various type of projects, offices, condominiums, residential and retails commercial.
City Square Decoration ကို 2007ခုနှစ်တွင်ကိုနန္ဒ မှဦးစီးတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုနန္ဒသည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အဆောက်ဦးအတွင်းပိုင်း အပြင်ပိုင်းအလှဆင်ခြင်း နှစ်အတော်အတန်ကြာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ City Square Decoration ကိုလုပ်သက်ရင့်၍ကျွမ်းကျင်သော အင်ဂျင်နီယာများ ၊ ဒီဇိုင်းနာများ ၊ လက်သမားများ ၊ အထွေထွေလုပ်သားများတိုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် ရုံးခန်းများ ၊ သံရုံးများ ၊ ဘဏ်များ ၊ ကွန်ဒိုမီနီယမ်များ ၊ လူနေအိမ် နှင့်ွတိုက်ခန်းများ ၊ ဆိုင်ခန်း များ နှင့် ကုန်တိုက်ကြီးများကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါသည်။ မျက်နှာချပ်တတ်ဆင်ခြင်း နှင့် အခန်းကန့်ခြင်း သစ်သား ၊ ဂျင်ဆင်ဘုတ် ၊ ပိုလ်စတာဘုတ် ၊ PVC ဘုတ် များဖြင့် မျက်နှာချပ်တတ်ဆင်ခြင်း နှင့် အခန်းကန့်ခြင်း တို့ကိုခေတ်မှီသော ဒီဇိုင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မူု့ပေးနေပါသည်။
+(95 9) 43138630, +(95 9) 454313863
No.94, 157 th St,
© 2017-2019 City Square Interior Decoration Co., Ltd. All rights reserved.